Qaxootiga reer Siiriya imisa Lacag ah ayaa Yurub lagu keenaa , Rag & Baasabooro la qabtay (Daawo Muuqaal) - iftineducation.com
Qaxootiga reer Siiriya imisa Lacag ah ayaa Yurub lagu keenaa , Rag & Baasabooro la qabtay (Daawo Muuqaal)
iftineducation.com – Booliiska mid ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxa uu soo bandhigay rag Muqalisiiin ah oo ka lacageeystay soo xambaariista Qaxootiga reer Siiriya si loo soo gaarsiiyo wadamo ku yaala Qaarada Yurub . Tuugadaan ayaa Qaxootiga Siiriyaanka ah waxay u sameen jireen Dokumeentiyo bug ah .
Muqalisiintaan ama ragaan oo u dhashay intooda badan Laatiin America waxeey Baasabooro bug ah qaxootiga reer Siiriya ku geeyn jireen dalka Spain. Booliiska dalka Spain oo ragaan Maafiyada ah guryaha ugu dhacay waxay sheegeen in calaa qof dadka Siiriya lagu keeni jiray gudaha dalka Spain aduunka gaaraya 6.000 ilaa 10.000 oo €uro .
Hadaawan hadii aad ka yartahay 15 sano muuqaal naxdin badan burcad badeed lasilcinayo daawo